Biladaha Iswiidhan ee olombikada soo dhammatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Biladaha Iswiidhan ee olombikada soo dhammatay
La daabacay måndag 13 augusti 2012 kl 10.45
Foto: Sveriges Radio och Scanpix
Waxaa shalay soo dhammaaday ciyaarihii olombikada ee xilliga kuleylaha oo dhowaahanba ka socday magaaladda London ee dalka Ingiriiska iyada oo Iswiidhan ka qeyb galkeeda uu noqday mid ka wanaagsanaaday inta hore loo filaaayay.
Iswiidhan ayaa shalay ku soo afjartay ka qeyb galkeeda olombikada guul lama filaan aheyd oo ay ku guuleystay bilada qalinka ee ciyaar ragga ee handboll oo ay shalay ciyaartay.
Iswiidhan ayaa guud ahaan ciyaaraha waxay kala soo hooyatay sideed biladood oo kala; 1 dahab, 4 qalin iyo 3 maar ah. Bilada dahabka ayaa waxaa soo ciyaaryahanada kala ah Fredrik Lööf iyo Max Salminen, waxayna aheyd ciyaar doomaha shiraacda.
Dhowr jeer ayaa waxaa dhcday in ciyaaryahanada Iswiidhan ay ku dhowaadaan in ay ku guuleystaan bilado kale oo dahab ah waxaa tusaale ahaan ka mid ahaa markii gabadha fardo fuulka ka ciyaarta ee Sara Algotsson oo boodista ugu dambeysay ee ka xigtay bilada dahabka faraskeeda lugta ku dhufsaday birta xeendaabka.
Hase yeeshee waxay ku guuleystay bilada qalinka ee farda fuulka taasi oo aheyd biladii ugu horreysay ee Iswiidhan ku guuleysto ciyaaraha London 2012.
Sidoo kale Lisa Nordén ayaa ku dhowaatay in ay bilada dahabka ah qaadato ciyaaraha triathlon, laakiin waxay heshay bilada ku xigta ee qalinka iyada oo dhibco aan badneen ku weysay bilada dahabka.
Xitaa ciyaaryahanka bootinka dheer Michel Tornéus ayaa bilada maarta ku dhowaaday in uu qaado iyada oo hal centimitir keliya ay ka xigtay in biladaasi uu qaado waxuuna ka galay kaalinta afaraad.
Waxaa sidoo kale jira in xiddiga si weyn loogu filayay in sanadkan ay ka soo qaadaan olombikada bilado dahab ah in dhibaatooyin ay la soo darsaan waxaana xiddigahaasi ka mid ah xiddigta dbaasha Therese Alshammar oo uu booday xidid luqunta ah oo ay si caadi u awoodi weysay in ay dabaalato.
Waxaa iyana uu farskiisa dhaawacmay Rolf-Göran Bengtsson oo ciyaarta kama dambeysta ah ee fardo fuulka aan ka qeyb qaadan ka dib markii faraskiisa Casall uu qoobka ka dhaawacmay.
Bilad uruursiga ciyaaraha Iswiidhan ee sanadkan ayaa ka wanaagsan kii afar sano ka hor ee magaaladda Bakiin ee dalka Shiinaha ciyaarahaasi oo Iswiidhan ay kala soo hooyatay shan biladood oo mid dahab ah uusan ku jirin.
Dalalka Norway iyo Denimark ee deriska la ah Iswiidhan ayaa ciyaaraha London ka soo qaaday bilado ka badan Iswiidhan iyada oo dalalkaasi midkiiba uu soo qaaday labo biladood oo dahab ah hase yeeshee Finland ayaa wax dahab ah aan ka soo qaadin olombikada halka dalka Iceland uu ciyaaraha kaga soo laabtay bilad la'aan.
Ciyaaraha Olombikada ee London 2012 ayaa ahaa kuwoodii 30-aad waxaana olombikada xigta martigalineysa magaalada Rio ee dalka Brazil sanadka 2016.
Fredrik Lööf/Max Salminen - doonmaha shiraaca, starbåt
Sara Algotsson - Fardo fuul
Håkan Dahlby - Shiish
Lisa Nordén - triathlon
Sverige - kubada gacanta raga
Rasmus Myrgren - doon shiraac, laser
Johan Eurén - lagdin, 120 kg
Jimmy Lidberg - lagdin, 96 kg